Banyere Anyị - Shanghai P&Q lighting Co., Ltd.
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. guzosie ike na 2005 bụ ọkachamara ọkụ emeputa ke anwụ-mgbatị, plastic injection, na mpempe akwụkwọ metal.
Amalite site a nta onye n'ime a ibu onye na ya na-anwụ-mgbatị na nzukọ factory na Haining nzọụkwụ site nzọụkwụ. Die mgbatị igwe si 200 tọn ~ 800tons. Anyị na-anọgide na-etinye ego na akụrụngwa ọhụrụ iji nwee ihe ịga nke ọma na-eche ihe ịma aka nke mmelite na-aga n'ihu n'ihu, ma na-enyekwa ngwọta kachasị mma maka mkpa ọ bụla na ndị ahịa anyị.
P&Q bụ enweghị plastic injection na mpempe akwụkwọ metal factory, ma nwekwara ike inye plastic injection na mpempe akwụkwọ metal akụkụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Ma ọ bụ n'ihi ụkpụrụ atọ bụ isi anyị na-agbaso na afọ ndị ahụ ọkachamara na ọkụ, ime ihe n'eziokwu nye ndị ahịa, na ibu ọrụ nke onwe anyị. Naanị n'ihi ihe ndị a, anyị ji nwayọ merie ntụkwasị obi ndị ahịa anyị ma bụrụkwa nke nwere nkwado obi ụtọ na ogologo oge yana ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama na mba ụwa niile, dịka Braums Australia, Pierlite, Gerard Lighting Group, SYLVANIA, LENA Lighting, LUG Light Factory , wdg.
Anyị isi n'ichepụta ngwá na-imported kpọmkwem site Taiwan.
Ahụmahụ injinia nwere ike inyere dozie nsogbu dị iche iche n'oge imewe na mmepụta ogbo.
Nchịkwa Ogo siri ike
Ngwaahịa mepụtara na P&Q ISO9001 ụlọ ọrụ nyere ikike ịrụ ọrụ siri ike na njikwa njikwa nzukọ America, Australia na ụkpụrụ European.
Nzukọ P&Q Lọ ọrụ
Mmepe Akụkọ ihe mere eme
P & Q ọkụ tọrọ ntọala site na Frank Ji, ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Songjiang, Shanghai
P&Q na-akwado ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ kacha ukwuu nke Australia Gerard Lighting Group.
P&Q anwụ mgbatị ogbako ike. Factory ISO9001 gbaara.
P&Q anwụ mgbatị na nzukọ factory aga Haining, Zhejiang,
Mmepụta P&Q & njikwa amalite ọrụ dabere na sistemụ ERP.
Anyị bụ ndị ọkachamara na aghụghọ nke ịbecha ihe eji anwụ anwụ maka ịcha na ịkpụzi akụkụ. Akụrụngwa a na-eme ka ịdị n'otu dịkwuo mma ma na-enye ohere iji nweta akụkụ dị mkpa na-enweghị mkpa ọrụ arụmọrụ ọzọ.
Specific n'elu ọgwụgwọ dị ka chọrọ na ụdi Filiks.
Ọma polishing ụlọ site abrasive vibration na ígwè bọl shot ọgbụgba ọkụ ụlọ ọrụ -eme ka omume iji nweta a n'elu mma n'elu imecha.
P&Q na-ejikwa ọrụ ọ bụla ọzọ achọrọ ka arụchaa
(mkpuchi, polishing, wdg), na akwụkwọ ikike zuru ezu na ogo na nsonaazụ ikpeazụ.
Ileba Ihe ngosi
Ọrụ Dị Egwu Nke Ndi Otu Anyị Sitere Na Ndị Ahịa Anyị!
Companylọ ọrụ Akwụkwọ